Phandeeyar Win up to USD 40,000 to kick start your civic tech project
February 6, 2017 Aung Win Htut #socialimpactMM, CivicTech, Phandeeyar Labs, Uncategorized
Myanmar and English versions below:
သင့်တွင်ရှိသော Civic Tech စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက် ရန်ပုံငွေရယူလိုက်ပါ
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ အထိရယူနိုင်ဘို့ Innovation Marketplace မှာယခုပင် လျှောက်ထားလိုက်ပါ
အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လူအများလက်လှမ်းမီလာအောင် လုပ်ပေးချင်ပါသလား၊
လူထုနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မှတ်တမ်း တင်နိုင်သည့် စနစ်များ တည်ဆောက်လိုပါသလား၊
နိုင်ငံသား များ၏ အကြံပြုချက်များကို တာဝန်ရှိသူများထံပေးပို့ရန်အတွက် ကူညီလိုပါသလား၊
လူမှုတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လူအများ၏ထောက်ခံအားပေးမှုရအောင် ပြုလုပ်လိုပါသလား၊
သင့်ရဲ့ Civic Tech စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့ဖို့နဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ အထိရှိမယ့် ရန်ပုံငွေကို ရယူနိုင်ဖို့ Innovation Marketplace ကိုလာရောက်ပါဝင်လိုက်ပါ။
Innovation Marketplace ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်မှာ နည်းပညာအသစ်တွေသုံးပြီး လူထုပါဝင်မှု အားကောင်းလာအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးရာ နဲ့ FHI 360 တို့က USAID ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် အဆင့် ၃ဆင့် ပါဝင်ပါသည်။ (၁) Concept development stage, (၂) MVP (Minimum Viable Product) stage နှင့် (၃) Pilot stage တို့ဖြစ်ပါသည်။ Innovation Marketplace ပွဲအစီအစဉ်သည် အဆင့် (၁) Concept development stage ကို ဦးတည်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Innovation Marketplace တွင်ပါဝင်မည့် solution များသည် https://opensource.org/licenses အောက်ရှိ လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်ရန် လိုပါသည်။
ပွဲအစီအစဉ် ပြုလုပ်မယ့်နေ့ရက် နဲ့ နေရာ
ဖန်တီးရာ၊ Myanmar Innovation Lab
အမှတ် ၅၆၁၊ MAC တာဝါ၊ ၁၁ ထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်။
Innovation Marketplace မှာ Civic Tech ကိုအသုံးချရန်စိတ်ဝင်စားသူ နည်းပညာသမားတွေကော နည်းပညာသမားမဟုတ်တဲ့သူတွေပါ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
လျှောက်ထားဖို့ စိတ်ဝင်စားရင် ဒီနေရာ (အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်) နဲ့ ဒီနေရာ (မြန်မာဘာသာဖြင့်) မှာ လျှောက်လွှာ ဖြည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Get your civic tech idea funded
Apply now to innovation marketplace forachance to win up to USD 40,000
Do you have an idea on how tech could be used to:
Make public information more accessible?
Facilitate the documentation of key issues affecting the community?
Help citizens communicate feedbacks and complaints to the authorities?
Mobilise popular support for social change?
Come pitch your civic tech idea at Innovation Marketplace forachance to buildateam around your idea and access up to $40,000 in funding to make itareality.
The whole program has3phases that involve (1) Concept development stage, (2) MVP (Minimum Viable Product) stage, and (3) Pilot stage. The Innovation Marketplace event mainly focuses on phase 1: concept development stage.
Please note: All solutions will need to be licensed under one of the following Open Source license https://opensource.org/licensesThe Details
Date: 16th-17th March
Venue: Phandeeyar: Myanmar Innovation Lab
11th Floor of MAC Tower, 561, Merchant Road, Yangon 11181
Innovation Marketplace is open to both technologists and non-technologists keen to implement Civic Tech solutions. Organisations and individuals are both encouraged to apply.
Interested applicants are invited to fill in the application form here (in English) or here (in Myanmar)